Martech Zone: Welcome to My New Martech Publication! | Martech Zone
Ọ bụ naanị otu afọ kemgbe m ikpeazụ reskinned anyị WordPress saịtị. Mgbe m masịrị ndozi ahụ, enwere m ọtụtụ ngwa mgbakwunye na nhazi iji mee ka ọ rụọ ọrụ otu m si chọọ ya. Na WordPress, nke ahụ nwere ike ịmalite ịkọwa ọdachi site na arụmọrụ arụmọrụ ma ana m ahụ mgbawa na ntọala.
Yabụ, agara m ịchụ nta maka imewe nke nwere ike itinye ma ngosipụta buru oke ibu yana ịza ihe ntanetị - ma na-agba ndị na-agụ akwụkwọ anyị ume ịrapara iji chọta ozi ha na-achọ.
Amalitere m omenala WordPress nwa isiokwu karịrị otu ntọala na-akwado nke ọma zụtara site na Okwu, wee gbakwunye ụfọdụ nnukwu ọrụ anyị chọrọ ịkwanye ọdịnaya ahụ na ngwa mkpanaka anyị yana tinye ndepụta anyị na ụfọdụ ọrụ ụfọdụ ebe anyị chọrọ ịkekọrịta ọdịnaya ahụ.
Dị ka ị nwere ike ịchọpụta, enwetaghachiri m aha m na Blog Technology Technology ka Martech Zone, Na-eji okwu ụlọ ọrụ akọwapụtara maka ahịa na teknụzụ ahịa… MarTech. Okwu blog agabigala n'akụkụ ka m gara n'ihu na-ebipụta nyocha na isiokwu ndị lekwasịrị anya na-enyere ndị ọkachamara aka nyocha, ịchọpụta, na ịmụ banyere ahịa na teknụzụ ahịa.
Enwekwara m ngalaba dị mfe m zụtara ahia. teknụzụ na na-aga n'ihu ebe a (anyị nwere ike ịmegharị ihe niile na ngalaba ahụ ozugbo .technology ngalaba dị ntakịrị karịa).
Ihe Ọzọ Na-eme Martech Zone Nwere?
Ngwa ọrụ - Enwere m ihe zuru ezu ugbu a Ihe omuma ngalaba, nke gunyere ihe omume, ocha, na ihe ndi ozo.
Podcast - Anọgidere m na-agba ndị isi ngwanrọ ajụjụ ọnụ, ndị na-arụ ọrụ, ndị edemede, na ndị ọkà okwu sitere na ụlọ ahịa na ụlọ ahịa na Martech Zone Ajụjụ Ọnụ.
Kedu ihe mgbaru ọsọ kasịnụ maka Martech?
Enwere m ike ịbụ afọ iri pụọ, mana m na-ele anya maka mmekọrịta na ụlọ ọrụ ndị otu, ndị na-enye ọrụ, obodo, agụmakwụkwọ, na asambodo… ma ọ bụrụ na ị nwere ihe na-agbakwunye na uru nke mbipụta m, mee ka m mara!
Tags: blogJenn lisakblog teknụzụ ahịankatamarte blogobodo MartechEbe a na-amụ martechogeisiokwuisiokwu mkpado
Kedu otu mmalite si amalite ntu na ngwa ahịa ha